Isithwathwa esimnyama: incazelo, izici nomonakalo. Vikela izitshalo zakho | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Lapho i- umkhuhlane obandayo, ingahle ifike nezici ezithile ezihlukile njengokuqukethwe okuphezulu noma okuphansi komswakama. Ngaphezu kwalokho, ingahle ihambisane nemvula enkulu. Kulokhu, sizokhuluma nge- isithwathwa esimnyama. Kuyisimo esisondela ezweni lakithi ngamaza abandayo amanje nangobuningi be-polar obungene enhlonhlweni.
Uma wake wezwa igama leqhwa elimnyama futhi ungaqiniseki ukuthi liyini, hlala lapha ufunda le ndatshana, ngoba sizokutshela konke.
1 Yini iqhwa?
1.1 Isithwathwa esimhlophe
1.2 Isithwathwa esimnyama
2 Ukulimala kwesithwathwa okumnyama
3 Ungazivikela kanjani izitshalo
Into yokuqala okufanele siyicacisele labo abangakazi, ukuthi yini iqhwa. Ukwehla kwamazinga okushisa angaphansi kuka-0 ° C. Lapho ithemomitha lehla ngaphansi kwalelo zinga lokushisa kanye nengcindezi yasemkhathini esinayo emhlabeni wethu, amanzi ayaqina futhi akhe amakristalu eqhwa ayizinhlangothi eziyisithupha ahlangana ndawonye akhe isithwathwa.
Kwesinye isikhathi akudingekile ukuthi kwehliswe izinga lokushisa ngaphansi kuka-0 ° C ukuze kube khona isithwathwa, kepha kunezinhlobo eziningana esizozichaza ngezansi.
Yilokho isithwathwa lapho izinga lokushisa lingaphansi kuka-0 ° C bese lisondela noma lilingana nezinga lokushisa le- iphuzu lamazolo. Lapho lokhu kwenzeka futhi izinga lokushisa lisondela endaweni yamazolo, amanzi aqala ukujiya. Ngokuvamile, uma amazinga okushisa engaphezulu kuka-0 ° C, amazolo ayakheka futhi awe ezimotweni, ezitshalweni, ezindleleni, njll. Kungaleso sikhathi-ke lapho singabona khona uketshezi lwamanzi olufakwe kulezi zindawo. Kodwa-ke, ubizwa ngokuthi yiqhwa elimhlophe lapho, emazingeni okushisa angaphansi kuka-0 ° C, amazolo ajwayelekile aphenduka iqhwa.
Manje sibheka ikhithi yombuzo ngale ndatshana. Uhlobo lwesibili lwesithwathwa yiqabaka elimnyama. Siqukethe iqhwa lapho izinga lokushisa lehla ngaphansi kuka-0 ° C kodwa iqhwa alakheki. Lokhu kungenxa yokuthi umoya womile futhi awunamswakama nhlobo. Njengoba ingenawo umswakama, izinga lokushisa alilingani nephuzu lamazolo, ngakho-ke akukho kuncipha kwamanzi, ingasaphathwa eyokwakhiwa kwesithwathwa.
Lawa makhaza amnyama avame ukuhambisana isibhakabhaka esinamafu ngokuphelele noma isivunguvungu esithile ezingxenyeni ezingezansi zomkhathi.
Ukulimala kwesithwathwa okumnyama
Ungase ucabange ukuthi iqiniso lokuthi iqhwa alibangeli iqhwa lingcono kakhulu. Kodwa-ke, iyesatshwa kakhulu kuneqhwa elimhlophe ngoba ilimaza kakhulu izitshalo. Umoya omile okwakhiwe ngawo lolu hlobo lwesithwathwa uhlasela ngqo ukwakheka kwangaphakathi kwezitshalo futhi ubangele ukuba kwakheke amakristalu eqhwa ngaphakathi kwesitshalo. Lapho leli qhwa lakha ngendlela eqondile, kudabula izicubu zangaphakathi zesitshalo futhi wenze ulwelwesi lwangaphakathi lome, okubangela ukufa kwesitshalo.
Yaziwa njengeqhwa elimnyama ngoba iso lenyama liyabona ukuthi isitshalo sibola kanjani futhi siphenduke sibe mnyama. Uma umonakalo unamandla kangangokuba uthinta izingxenye zokubekisa zesitshalo, uzofa. Kwesinye isikhathi uma sibavikela ngokwanele noma iqhwa lingahlali isikhathi eside, bangaphila.
"Izindaba ezimnandi" ukuthi kuyabanda kuthinta kuphela izitshalo ezihlala ziluhlaza. Okusho ukuthi, lapho lesi simo senzeka, sihlasela lezo zitshalo isimo sazo sezitshalo esisebenzayo. Izitshalo nezihlahla ezinqabayo ziyayisusa le miphumela ngoba azinayo neze imisebenzi yeselula.
Lezi zithwathwa azinakulindelwa kude kakhulu kusengaphambili, ngakho-ke ukuzilungiselela kunzima kakhulu. Ukuphela kwento engenziwa ukuzama ukuvikela izitshalo emiphumeleni eseduze.
Ungazivikela kanjani izitshalo
Njengoba izitshalo ezisesimweni semifino ezisebenzayo zilimala kakhulu, kufanele senze okuthile ukuzivikela ekulimaleni. Kulezo zitshalo ezisezimbizeni noma esinazo engadini, kulula ukuzivikela. Kumele uwafake ngaphakathi endlini uwafake endaweni ekhanyayo. Uma sizibeka kuvulandi obhekene nodonga, nazo zizovikelwa.
Ukunakekela izitshalo ezingekho ebhodweni kuyinkimbinkimbi kakhulu. Kodwa-ke, sizonikeza lapha ezinye izeluleko zokuvimbela isithwathwa esimnyama ekubhubhiseni izitshalo zethu.
Uma sinesihlahla noma isihlahlana esivandeni esitshalwe ngaphandle, singamboza umhlabathi ngongqimba lukadoti. Lokhu kuvumela ukuthi kudalwe uhlobo lwesithiyo esivimbela amakhaza ukuthi angene enhlabathini engaphansi. Ngale ndlela, sizobe sivimbela amanzi asezimbotsheni zezitshalo ukuthi angaqandi futhi azilimaze ngaphakathi.
I-Podemos beka uhlelo lokunisela olubhekele ukufafaza isitshalo amanzi athile. Ngale ndlela, uma izinga lokushisa lingaphansi kuka-0 ° C, sizothola ungqimba lweqhwa olwakhiwe ngaphezulu kwezicubu zezitshalo futhi sisebenze njengesivikelo. Iqhwa livikela izicubu zezitshalo.
Gwema ukulima ngokweqile umhlaba phakathi nezinyanga zasebusika. Lawa makhaza ayenzeka ngesikhathi sasebusika. Uma singalimi, sizobe sishiya ugu olunzima ukuze sakhe phezu kwenhlabathi evikela umhlaba ongaphansi emakhazeni.
Ungaba futhi beka abalandeli ukuhambisa umoya nokuthi ukwehla okunamandla kakhulu kwezinga lokushisa akubangelwa.
Indlela esetshenziswa kakhulu yile ukuvikelwa kwezitshalo ngopulasitiki noma ngamasaka. Okufanelekile ukumboza izitshalo ngoplastiki noma izikhwama nangebhakede lamanzi ngaphakathi. Lokhu kwenziwa ngoba amanzi alahlekelwa futhi athole ukushisa okuningi ngendlela ehamba kancane kunomoya. Le yindlela esebenza ngayo njengomlawuli oshisayo kule ndawo emincane, ngoba lapho amanzi ehlangana kupulasitiki, kuzokhipha ukushisa okucashile.
Ngiyethemba ukuthi ngalezi zeluleko ungadlulisa lesi sithwathwa esimnyama ngaphandle kothando.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Isithwathwa esimnyama
Imvula yezinhlanzi namaxoxo